Hery Rajaonarimampianina : « Ampy izay ny adilahy politika » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Ampy izay ny adilahy politika »
Raha tonga nitarika ny lanonana fametrahana ny vato fehizoro amin’ny fanombohan’ny asa fanamboarana ny “Lalan’ny Atody” (Route des Oeufs) teny amin’ny Kaominina ambanivohitra Mahitsy, distrikan’Ambohidratrimo, omaly, ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, dia nambarany tamin’izany fa “ampy izay ny adilahy politika, ampy izay ny fifanandrinana, ampy ihany koa izay ny herisetra amin’ny endriny maro samihafa eto amin’ny firenena, ampy izay ny fahantrana ary ampy izay ny kolikoly… Ndao hifanome tanana amin’ny fampandrosoana ny firenena ao anatin’ny toe-tsain’ny Fisandratana isika”.
Notsindriany fa ilain’ny firenena sy ny vahoaka ny fitoniana. “Mila fitoniana izany fampandrosoana izany. Koa mijoroa manaraka ny lalàna, mijoroa amin’ny toe-tsain’ny Fisandratana, mijoroa amin’ny tena fitiavan-tanindrazana fa izany no tsy ampy eto amin’ity firenena ity. Aoka isika tsy ho voarebireby amin’ny lainga ezahina hafafy ka hitondra ho any amin’ny fanakorontanana ”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, hentitra.
Ankoatra izay, nohamafisin’ny Filoham-pirenena tamin’ireo vahoaka marobe nanotrona azy tao amin’ny Kaomina Mahitsy fa mila fotoana sy faharetana ny fampandrosoana ny firenena. Efa maro, hoy izy, ny zava-bita sy ny fotodrafitrasa natsangana sy natolotra ny vahoaka, toa ny teo amin’ny tontolon’ny fahasalamana tamin’ny alalan’ny fanomezana hopitaly, teo amin’ny fampianarana amin’ny fanomezana sy fanorenana sekoly, eo amin’ny lafin’ny fifaneraserana sy fivezivezena amin’ny alalan’ny fanamboaran-dalana, eo amin’ny lafin’ny herinaratra amin’ny fanomezana angovo, sns. Nambarany fa mbola maro ihany koa ireo an-dalam-pamitana sy andalam-pananganana. “Izany rehetra izany dia tafiditra amin’ny vinan’ny Fisandratana avokoa. Tafiditra amin’ny fisandratan’ny firenena, izay tafalatsaka tao anatin’ny fahantrana nandritra ny 50 taona mahery. Nidina hatrany ny fari-piainan’ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Fotoana izao hialàna amin’izany”, hoy hatrany ny Filohan’ny Repoblika.
Tetsy andaniny, nanisy resaka mahakasika ny fifidianana ihany koa ny tenany tamin’izany ka nanipy teny amin’ny firosoan’ny Fitondram-panjakana amin’izany. “Efa mandroso isika ary ilaina ny fanapahan-kevitry ny vahoaka amin’ny alalan’ny fifidianana. Mahaiza mijery ny ho avin’ny firenena ao anatin’ny toe-tsain’ny fisandratana. Mila manana ilay hambo-po iombonana isika hoenti-mampandroso”, hoy izy teny am-pamaranana.
Mazava ny fanohanana. Nambaran’ny fikambanan’ireo Ampanjaka avy amin’ny Faritra Atsimo Atsinanana (AA) sy Vatovavy Fitovinany (V7V) ampahibemaso nandritra ny fandalovan’ny filoham-pirenena tany Farafangana, omaly, fa manolotra ary manohana an’i Hery Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana 2018 izy ...Tohiny